बाबुरामको संसदमा प्रश्नः घाइते, वेपत्ता र अपाङ्गका मुद्दा हल गर्न कुन चाहिँ कानुनले रोक्यो सरकार ? – Everest Dainik – News from Nepal
बाबुरामको संसदमा प्रश्नः घाइते, वेपत्ता र अपाङ्गका मुद्दा हल गर्न कुन चाहिँ कानुनले रोक्यो सरकार ?
काठमाडौं, नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले नेताहरु सरकारमा गएपछि जनतालाई बिर्सिँदै गएको आरोप लगाएका छन् ।
संघीय संसदमा सम्बोधन गर्दै डा. भट्टराईले सत्तामा पुगेपछि जनता बिर्सिएको हो कि जस्तो लागेको बताउँदै भने, “गाडीमा चढेर सडकमा धुलो छैन, सबै राम्रो छ भन्ने जस्तो लागेको देखिन्छ । के चश्मा फेरिएकै हो ?”
सरकारले शहीद र वेपत्ता परिवारको दर्दनाक अवस्था रहेको र घाइतेहरुको समस्या सम्बोधन गर्न कसले रोक्यो भन्दै बाबुरामले शहीद, वेपत्ता र घाइतेहरुप्रति आफ्नो अहिले पनि दायित्व रहेको बताए । “के इच्छाशक्ति मरेको हो या बिर्सिएको हो ?” उनले प्रश्न गरे ।
संविधान धेरै प्रगतिशील बनेपनि यसमा समयानुकुल परिवर्तन गर्नुपर्ने मान्यता रहेको बताउँदै बाबुरामले राज्य पुनःसंरचना आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न के ले रोकेको हो भन्ने प्रश्न गरे । असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सांसद डा. भटटराईले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या इच्छाशक्तिमा कमी भएको कारण आएको उनको जिकिर थियो । कानुन बनाउन ढिलाई भएको छ । कतै यो संघीयता प्रति अरुचि भएर त हैन भन्ने प्रश्न समेत उठेको उनले प्रश्न गरे । कानुन बनाउने काम छिटो गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
चेपाङ बस्तीका बच्चाहरु अहिले पनि पढन नपाएको घटना सुनाउँदै बाबुरामले भने, “संविधानमा परिकल्पना गरेजस्तो उत्पीडित जाति या एक प्रतिशत तल रहेको जाति जनजातिका लागि उत्पीडित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रमार्फत सम्बोधन गर्न हामीले किन सकेनौं । किन उनीहरुका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकेनौं । त्यो मुद्दा कहाँ हरायो ?”
सुशासन र शान्ति सुरक्षाका कुरा सबैले भनेका छन । तर मैले सुशासन र शान्ति सुरक्षाको यो सरकारको दायित्वको कुरा हो । यसमा संविधान र कानुनले छोडदैन । व्यवहारमा पालना गर्ने कुरा हो । यो कम्युनिष्ट प्रणाली या लोकतान्त्रिक प्रणालीको कुरा होइन । तर यो बीचमा जे जस्ता घटना भएका छन, के त्यसबाट उम्किन मिल्छ ?
“म अर्थमन्त्री भएको नयाँ जहाज किन्ने प्रक्रिया शुरु भएको थियो । तर त्यसलाई बंग्याएर पुरानो जहाज किन्ने, नक्कली कम्पनी खडा गरेर किन्ने कस्तो सुशासन हो ?” उनले प्रश्न गरे । बुढी गण्डकी भकुण्डो जस्तो भएको पनि उनको आरोप थियो ।
निर्मला हत्याबारे बोल्दै बाबुरामले प्रहरीले प्रमाण लुकाउन खोजेको आरोप लगाए । “कुन चाहिँ अनुसन्धानमा पीडितलाई नुवाई धुवाई गरिन्छ ? प्रहरीकै अगाडि त्यसरी प्रमाण नष्ट गरिएको छ । प्रमाण मेटाउनेलाई केरकार गरेर सत्यतथ्य पत्ता नलाग्ने कुनै दुनियाँमा हुन्छ ? प्रतिपक्षलाई मात्रै दोष दिएर हुन्छ ?” उनले भने ।
विकास र समृद्धिका सपना राम्रा कुरा भएपनि तिनीहरुलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।